Mety Ho Afaka Hamaha Ny Kizo Vokatry ny Lalàna’ny Hetra Amerikana Any Trinidad sy Tobago Ve i Trump? Toa Manantena Izany Ny Mpitarika Ny Mpanohitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Febroary 2017 1:30 GMT
Ny mpitarika ny mpanohitra, Kamla Persad-Bissessar, nandray fitenenana ao anatin'ity lahatsary tao amin'ny tantara vaovao tao amin'ny CNC3 ity, momba ny lalàna FATCA any Trinidad sy Tobago izay nalefa tany amin'ny Komity Iraisan'ny Parlemanta hifanakalozana hevitra.
Mikendry ny hiantoka ny hampandovana hetra ireo olom-pirenena Amerikana sy ny mponina manana fananana ara-bola any ivelan'ny firenena ilay Lalàna Momba ny Fanarahan-dalàna amin'ny hetra Ho an'ny Kaonty any ivelany izay navoakan'ny Kongresy Amerikana tamin'ny 2010. Noheverina ho toy ny lalàna fanaovana amboletra izy io, tsy dia nisy fanoherana izany, na izany aza firenena maro no nanasonia — fa tsy mbola anisan'ny iray amin'izy ireo i Trinidad sy Tobago.
Nisy tsy hasosorana be tamin'ny aterineto rehefa injay ny firenena tsy nahatratra ny fe-potoanany ny 30 Septambra 2016, noho ny mpanohitra nibahana ny fidiran'ilay lalàna teny amin'ny parlemanta. Tamin'izany fotoana izany, nanazava ny mpitarika ny mpanohitra Kamla Persad-Bissessar fa “manahy momba ireo fepetra henjana ao anatin'ilay Volavolan-dalàna” izy sy ny mpiara-miasa aminy. Namaly ny governemanta fa efa niatrika momba ireo olana ireo ry zareo, nefa noho ny mpanohitra nivoaka ny parlemanta – fihetsika izay notsarain'izy ireo ho niniana - dia tsy niadiana hevitra ilay raharaha.
Fahadisoam-panantenana no fanehoankevitry ny vahoaka, indrindra satria hoe mpanohitra ny iray amin'ireo nampiditra ilay lalàna teny amin'ny palemanta, fony izy ireo tao amin'ny governemanta. Ao amin'ny firenena izay ahitana kolikoly raikitampisaka, ny FATCA, araka ny finoan'ireo mpiserasera, dia afaka manampy hahazoana antoka ny fangaraharan'ny fifanakalozana ara-bola. Naniry ny ho afaka hanao fifanarahana amin'i Etazonia tsy misy sakana na kely aza ireo tomponà orinasa ary nifofotra mafy ny sehatry ny banky hametraka ny feony mba hanatanterahan'ilay firenena ny andraikiny.
Nandalo dia lasa ny 31 Desambra 2016– daty manan-danja iray hafa amin'ny dingan'ny fanarahan-dalànan'ny FATCA. Tamin'ny 20 Janoary 2017; nihaona hiresaka momba ilay olana ny komity voafidy iraisana, izay nanosika ireo mpiasan'ny banky haneho fanantenana hoe mety ho tratran'ny firenena ny 3 Febroary, fe-potoana farany napetrany hanaovana tatitra.
Tamin'ny 25 Janoary, na izany aza, niseho masoandro fa nanao zavatra hafahafa ny mpitarika ny mpanohitra: nanoratra ho an'i Donald Trump izy — fony izy mbola filoha voafidy — ary nanontany raha mihevitra ny hamarana ny FATCA ny fitantanany. Ahitana fiteny mitaky ny fanafoanana ny FATCA ny vovonana Repoblikana 2016, noho izany tsy ilaina intsony ny mieritreritra hoe mety hanohana hetsika toy izany i Trump raha ny kongresy izay fehezin'ireo Repoblikana no manosika azy.
Na izany aza, tezitra mafy ny haino aman-jery sosialy, nanakiana azy noho ny fitadiavany samy irery mpitarika avy any ivelany na dia talohan'ny nahatongavany ho eo amin'ny fahefana aza. Ny mpampiasa Facebook, Abeo Jacksibn, izay nandefa sarin'ilay taratasy voasonia, nimenomenona:
Tsy izany…. tsia tsy nanao izany izy. Tsiiiiia. Tsy nanao an'io ilay ankizivavy. Henoy ahoooooooooo
Mpamoaka lahatsoratra: Azfd mariho fa nosoratana ho an'i Trump ity taratasy ity raha MBOLA amperinasa kosa i Obama!!! Inona …. no…
Inona no tena atahoran'izy ireo?! Volavolan-dalàna nampidirin'IZY IREO tany amin'ny parlemanta. #iswhatnameprotocol
Niparitaka be ary nanehoana hevitra ilay taratasy, na nisy aza mpisera nilaza ny tenany ho “tsy nahaloa-bava“. Ny mpampiasa Facebook, Stefan De Gale, nanontany ny antony manosika ny mpanohitra:
Dia ahaona, andraso kely tena fitsambikinana miharihary izao.
1. Ianao amin'ny naha-praiminisitra dia nandrafitra volavolan-dalàna
2. resy tamin'ny fifidianana ianao
3. nentin'ny governemanta vaovao io volavolan-dalàna io ihany
4. Sintoninao hiala ny fanohananao ary angatahanao ny hisian'ny JSC [Komity Voafidy Iraisana]
5. Nahazo JSC ianao
…….dia nanoratra ity?
Henoy, omeo fiatoana aho eh
Nisy resaka be dia be tao amin'ny Facebook momba ilay fihoaram-pefy nataon'ny mpitarika ny mpanohitra. Rhoda Bharath namazivazy hoe:
Raha ny fahitàna azy, Kamla dia governemantan'ny tenany … eo amin'ny fireneny… #DeViceCyahDone
Peter E. Mitchell nanampy hoe:
Raha marina ity taratasy ity, dia fihetsika tsy ampiheverana ny an'ny Mpitarika ny Mpanohitra. Fifandraisana amin'ny Filoham-(Panjakana sy) Governemanta ary ny Filoham-(Panjakana) sy Governemanta ho avy dia heverina [ho] anjaran'ny Governemanta amin'izao fotoana izao no manao azy, izay raha resaka raharaha fifandraisana amin'ny any ivelany dia miasa amin'ny anaran'ny firenena iray manontolo (tafiditra amin'izany Mpanohitra).
Lahatsoratra iray navoaka tao amin'ny vohikala Trini Tuner naminavina — tamin'ny fitenim-paritra tanteraka — momba ny antony nanoratan'i Persad-Bissessar ilay taratasy:
‘O ry Trump…. mieritreritra ve ianao fa afaka hanome anay fiatoana amin'izany FATCA izany? Tsy mahita toerana na aiza na aiza ny mpitantambolan'ny antokonay mba hanafenana vola … “
Roa amin'ireo mpitantambolan'ny mpanohitra no karohina mba horoahin‘i Etazonia noho ny fiampangana azy amin'ny famotsiambola sy kolikoly. Ny Fijery ny Fanondroana ny Kolikoly 2016 avy amin'ny Transparency International nahita ny fitotongan'i Trinidad sy Tobago amin'ny toerany teo amin'ny #72 ny taona lasa ho lasa #101, midika ho tsy fahatokisan'ny olom-pirenena ny mpanao politika sy ny rafitr'izy ireo. Amin'izao endriny izao, ny lalàna FATCA dia manome fahefana ny banky US ny hisintona hatramin'ny 30% amin'ny vola naloa ho an'ireo tranom-pandraharahàna ara-bola any ivelany izay tsy manaiky ny hanome vaovao mikasika ny mpanjifany izay manana kaonty Amerikana. Tsy fanajàna – heverina hoe mbola mitoetra eo ambany fitantanan'i Trump ny FATCA – dia mety mbola hanimba bebe kokoa noho izany ny toekarena efa mihisatra ao Trinidad sy Tobago. Tamin'ny nanoratana ity, tsy nisy valinteny ofisialy avy tamin'ny Trano Fotsy.
3 herinandro izayGoiana
Marsa 2019 106 Lahatsoratra